जाडोमा खुट्टा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो उपाय अपनाउनुहोस्। – Khabaarpati
November 24, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on जाडोमा खुट्टा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो उपाय अपनाउनुहोस्।
चि’सो मौसममा हा’तगोडा फु’ट्ने सम’स्याबाट सबैजसो नै पी’डित हुन्छन् । जा’डोमा चि’सोको कारण सु’ख्खापन, छा’ला फु’ट्ने जस्ता सम’स्या देखापर्छन् । यस्ता सम’स्याले गर्दा अ’नुहार तथा हा’तगोडाको सु’न्दरतामा ह्रा’स आउँछ । त्यतिमात्र होइन चिसो मौसममा छा’ला का’लो हुने, सु’न्निने, चि’लाउने पनि सम’स्याहरु देखापर्छन् । त्यस्तै कहिलेकाँही राम्रोसँग ध्यान नदिँदा गो’डाको कु’र्कुच्चा नरा’म्रोसँग फु’ट्छ र त्यसबाट र’गत बग्ने र अ’त्यधिक दु’खाई हुने गर्छ । यसको समयमै उप’चार भएन भने कहिल्यै निको नहुने र सधै कु’र्कुच्चा कु’रुप देखिने पनि हुनसक्छ । यस्ता सम’स्याहरुबाट बच्न औ’षधि वा विभिन्न क्रिमहरुको प्रयोग गर्दा पनि छा’लामा स’मस्या आउन छोडेको छैन भने घ’रेलु विधिहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । तातोपानी चि’सो मौसममा राति सुत्नुभन्दा पहिले केही समय आफ्ना हा’तगोडा ता’तोपानीमा डुबाउनुपर्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
त्यसमा ३ चियाचम्चा चिनी राखेर धुँदा छा’लामा लागेको फो’होर पनि सफा हुन्छ । त्यसपछि स’फा गरेर क्रि’म लगाउँदा छा’ला नरम हुने र फु’ट्ने सम’स्या कम हुँदै जान्छ । मो’स्चराइजर हा’तगोडामा नुहाएपछि र रा’ति सुत्नुभन्दा अगाडि मोस्च’राइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ । मोस्च’राइजरको सट्टामा ते’लको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । जुत्ता जाडोको समयमा न्यानोको लागि दिनभरी जुत्ता लगाइरहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म आरामदायी जुत्ताको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । जुत्ता यस्तो हुनुपर्छ जसबाट हल्का हावा पनि छिर्न सकोस् । यदि कु’र्कुच्चामा फु’टेर घा’उँ भएको छ भने केही समय खुल्ला राख्ने गर्नुस् । यदि लामो समयसम्म गो’डामा जुत्ता लगाइराखियो भने चि’लाउने सम’स्या पनि पैदा हुनसक्छ । का’गती गो’डाको स’मस्या ह’टाउन र त्यसलाई नरम राख्न आधा का’गती काटेर धल्ने गर्नुस् । त्यसपछि नुन हालेर ता’तोपानीमा गो’डा डु’बाउने गर्नुस् । यो प्रक्रिया एक हप्ता’सम्म गर्दा गो’डामा भएको सम’स्या स’माधान हुँदै जान्छ । ते’ल गो’डामा हुने रु’ख्खापन ह’टाउनको लागि कहिलेकाँही फु’टेर निस्किएको छा’लालाई कैँचीले काटेर फाल्नुपर्छ । छा’ला का’ट्दा धेरै पी’डा हुने हुँदा ते’लले विस्तारै मालिस गर्नुपर्छ । चिनी एक चियाचम्चा सूर्यमु’खी फूलको तेलमा २ चम्चा चिनी हालेर विस्तारै गो’डामा म’साज गर्दा गो’डामा टाँसिएको धुलो सफा हुने र गो’डाका स’मस्याहरु कम हुँदै जान्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्। पछिल्लो समय नेपालीको घर–आँगनमा भित्रिएको फल हो, किवी । अत्यान्तै स्वा’दिलो र पो’षिलो भनिएको यो फल विगतमा नेपालका बन’जं’गलमा पनि पाइने गरेको बताइन्छ । जं’गलमा पाइने यस फललाई गा’उँघरतिर ‘ठे’कीफल’ भन्ने गरिन्थ्यो । त्यसो त ठाउँ अनुसार यसको नाम फरक फरक छ । कसैले गाईगु’ने फल पनि भन्ने गरेका छन् । स्वाद र पोष’णका आधारमा विश्वका फलहरुको सूचिकरण गरिएको छ । यसमा कि’वी पनि समावेश छ । अर्थात स्वा’दिलो र पो’षिलो फ’लमध्ये कि’वी पनि एक उत्कृष्ट फल हो । किवीको विशेषता के भने, यसमा अरु थुप्रै फलहरुको फ्लेवर पाउन सकिन्छ । जस्तो जं’गली ऐं’सेलु, भुँ’इकटहर आदि । कि’वीका दुई प्रकार कि’वी दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा झु’स हुने र अर्को नहुने । हा’वार्ड जातीको कि’वी बिश्वभर लोकप्रिय छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
कि’वीलाई जा’म, जुस, वा’इन, केक, सलाद आदि रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कि’वी स्वादिलो र रसिलो फल त हो नै, उत्तिकै पो’षिलो पनि । त्यसो त किवीमा केही यस्ता गु’णहरु हुन्छन्, जसले स्वा’स्थ्यमा प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउँछ । जस्तो, पा’चन प्र’क्रिया सु’धार्न होस् वा र’क्तचाप नि’यन्त्रण गर्न कि’वी उपयोगी हुने बताइन्छ । यस्तै द’मको समस्यामा, आँ’खाको सम’स्यामा, छा’लाको सम’स्यामा पनि किवी फ’ल फाइदाजनक मानिन्छ । यसले हाम्रो श’रीरको रो’ग प्रतिरो’धी क्ष’मता पनि बढाउने बताइन्छ । कि’वीमा प्रो’टिन, फाइ’बर, भि’टामिन सी, आ’इरन, फो’लेट जस्ता पो’षक तत्व पाइन्छन् । यो विभिन्न शा’रीरिक रो’गहरु नियन्त्रणमा पनि सहयोगी हुने बताइन्छ । एसिया प्या’सिफिक जर्नल अफ क्लि’निक न्यु’ट्रेसनमा प्रका’सित एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अ’निद्राको सम’स्यामा पनि कि’वीले औ’षधिको काम गर्छ । साथै यसले पे’टको विभिन्न स’मस्याबाट बचाउनुका साथै म’धुमेह, नि’मोनिया, द’म, रक्त’चाप, को’लेस्टोरलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ ।
सले छा’लालाई स्व’स्थ राख्न भूमिका खेल्छ । छा’लासम्बन्धि विभिन्न रो’गबाट पनि बचाउँछ । यसले आँ’खालाई समेत फाइदा गर्छ । किवीको नियमित प्रयोगले र’क्तचाप सन्तुलनमा रहन्छ । यसले मु’टु रो’गको सम्भावनालाईसमेत कम गर्छ । यसमा प्रसस्त आ’इरनको मात्रा हुने भएकाले ग’र्भवती महि’लाहरुको लागि निकै उपयोगी हुन्छ । कि’वीको कथा कि’वी फल सुरुमा चीनमा पत्ता लगाइएको र पछि न्युजिल्यान्डमा विकास भएको मानिन्छ । यसको बा’हिरी झु’स न्युजिल्यान्डको राष्ट्रिय च’रा कि’वीको भु’वा जस्तो देखिने भएकाले कि’वी नाम दिइएको हो । सन् १९७४ मा यसको औपचारिक नामाकरण भएको थियो । न्युजील्यान्डमा यसको खेती अत्यधिक मात्रामा हुने गर्छ । किवी खेतीको लागि चि’सो हावापानी उपयुक्त हुन्छ । कि’वीको एक स्व’स्थ बोटले सय कि’लोग्रामसम्मको उत्पादन दिन्छ । नेपालको पनि विभिन्न उच्च भु’भावमा यसको खेती गरिन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,